မ​နေ့က ​နေ့စဉ်​ခွန်​အား ကျမ်းပိုဒ်​က ၂ရာ၁၆.၇ မှာ ​ရေးထားတယ်​။ ...လူသည်​ အပြင်​သဏ္ဍန်​ကိုကြည့်​ရှု တတ်​ပြီး ထာဝရဘုရားက​တော့ အတွင်းစိတ်​နှလုံးကို ကြည့်​ရှုတတ်​ပါတယ်​။ လူ့​ရှေ့မှာ မိမိဟာ ​ကောင်းမြတ်​ပုံ ရှိ​ပေမဲ့ ဘုရား​ရှေ့မှာ​တော့ ညစ်​စုတ်​တဲ့အဝတ်​ လိုပါ။ တီ​ကောင်​ ယာကုပ်​ ..လို့ ကျမ်းစာ မှာ ဣသ​ရေလ လူမျိုးရဲ့ ဖခင်​ ယာကုပ်​လို့ ​ရေးထားပါတယ်​။
လူ ဖြစ်​တဲ့အတွက်​ မြစ်​ကြီးနား မြန်​မာပြည်​ အကြီးဆုံး DK Megga Church ကချင်​နှစ်​ခြင်းအသင်း​တော်​.. သိန်း​ပေါင်း ၄သောင်းခွဲ ကုန်​တဲ့ အ​ဆောက်​အဦကြီး ရဲ့ တန်​ဖိုးမဖြတ်​နိုင်​တဲ့ ​ကျောက်​စိမ်း လက်​ဝါးကပ်​တိုင်​ကြီး အတွက်​ စိုးရိမ်​မိတယ်​။ ခိုးခံရရင်​ ဘယ်​လို လုပ်​ကြမလဲ...။
ဒီ ဒူက​ထောင်​ ဧရာမအသင်း​တော်​ အ​ဆောက်​အဦ ကြီးကို ဘယ်​လို ထနန်းသိမ်းမလဲ ဆို​တော့.. ​မော​ရှေ၊ အာနန်​၊ ကာလက်​ လိုမျိုး ယုံကြည်​သူ​တွေ လိုပါတယ်​။ ယုံကြည်​ပြီးရင်​ ခရစ်​ယန်​အသက်​တာ (အကျင့်​ Work) ​ကောင်းဖို့ လိုပါတယ်​။ အကျင့်​​ကောင်း စိတ်​ထား​ကောင်းတဲ့ တပည့်​​တော်​များစွာ လိုပါတယ်​။ ​မောင်းမထုတ်​ရပါဘူး။
​ကျောက်​စိမ်း လက်​ဝါးကပ်​တိုင်​ အခိုးခံရရင်​၊ အကြမ်းဖက်​သမား အဖွဲ့ ​တွေ ဘုရား​ကျောင်း က သိန်း၇၀၀ ပီယာနိုကြီး ​ပေါ် ချိန်​ကိုက်​ဗုံး​ဖောက်​ လိုက်​ရင်​.. ဘယ်​လိုဖြစ်​မလဲ စိုးရိမ်​ရင်​​တော့ ..အသင်​လူ ..မစိုးရိမ်​နဲ့ ဘုရား ကွယ်​ကာမယ်​ လို့ ​ပြောချင်​ပါသလား။
ဏ္ဍသ​ရေလ ​တွေ တံတိုင်းမြို့ရိုး​ ပြန်​​ဆောက်​၊ တိုင်​ပြည်​ ပြန်​ထူ​ထောင်​ချိန်​ ​ပေါက်​ပြားတဖက်​၊ ဒါးတဖက်​ နဲ့ ဆု​တောင်းရင်း အလုပ်​ လုပ်​ခဲ့ကြတယ်​။ ​ခေတ်​သစ်​ ဣသ​ရေလ အစ္စ​ရေး ​တွေက​တော့ ကွန်​ပြူတာ ကိုင်​ရင်း ​သေနပ်​ကိုင်​ ရင်း ..အာရပ်​ ရန်​သူ နိုင်​ငံ များ ကြားမှာ.. တိုင်း ပြည်​ တည်​​ထောင်​ရတယ်​။
​မြန်​မာ့ ​ခေါင်း​ဆောင်​ ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​က ဒီပဲယင်းလုပ်​ကြံမှု မဖြစ်​ခင်​​လေး ၂၀၀၃ ခုနှစ်​မှာ မုံရွာ မြို့ လူထုကို မိန့်​ခွန်း ​ပြောခဲ့ပါတယ်​။ ဒီမိုက​ရေစီ ရဖို့ အရမ်းပဲ အချိန်​ ​ငွေ အသက်​​တွေ ​ပေးဆပ်​ ကြိုးစား ရတယ်​။ ရပြီးရင်​ ထိမ်းသိမ်းဖို့က ပို​တောင်​ ခက်​တယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ အင်္ဂလိပ်​ လူမျိုး​တွေ အိမ်​ဝယ်​ရင်​ အိမ်​ထိမ်းသိမ်းဖို့ ​ငွေ. အချိန်​ ဘယ်​​လောက်​ကုန်​မလဲ အရင်​ စဉ်းစား တွက်​ချက်​ကြတယ်​ လို့ ​ပြောပါတယ်​။
မုရမ်​ အယ်​ဒီတာ မနက်​၅နာရီ ​ဒေါင်းပ​ရေး Dawn Pray သွား​တော့ ၁၅မိနစ်​ ​နောက်​ကျတယ်​။​အောက်​ထပ်​မှာ ဟာလာဟင်းလင်း.. အ​ပေါ် ၃ထပ်​ က ဧရာမ ​ကျောက်​စိမ်း လက်​ဝါးကပ်​တိုင်​​အောက်​မှာ ကချင်​အဖွား၊ မိခင်​ ဖခင်​၊ လူငယ်​ ၅၀ ​လောက်​ ငြိမ်​ပြီး သင်း​ထောက်​က ဆု​တောင်း​ပေး​နေတယ်​။ လုံခြုံ​ရေးမရှိ လို့ ငြိမ်းချမ်းတယ်​ ​ပြောရမလား။
ဒီအ​ဆောက်​ဦကြီး ထိမ်းသိမ်းဖို့ လစဉ်​အလှု​ကောက်​ခံ ​ငွေ​တွေ ကုန်​မယ်​။ အ​စောင့်​​တွေ ခန့်​ထားရမယ်​။ စင်​ကာပူ ကမ်​ဘာဂမ်​ တရုပ်​အသက်​​တော်​ အကြီးကြီးကို ကချငိ​တွေ ည​စောင့်​လုပ်​ရင်း ၂ဖက်​အဆင်​​ပြေကြတယ်​။ ဒီမှာ ဘယ်​လို ထိမ်းသိမ်း ကာကွယ်​မလဲ။
ပိုအ​ရေးကြီးတာက လူ​တွေကို ဝိညာဉ်​​ရေး ထိမ်းဖို့ပါ။ ခွန်​အား​ပေးဖို့ပါ။ ၈မိုင်​ ညီအစ်​ကိုများ အသင်း​တော်​က​တော့ ဝတ်​ပြုခမ်းမကို အမြဲပိတ်​ထားတယ်​။ RC ခရစ်​ယန်​​ကျောင်း​တွေ​တော့ အ​စောင့်​နဲ့ အမြဲဖွင့်​ထားတယ်​။ အသင်​​တော်​ပိုင်​ ကားတစီးဝယ်​ဖို့ သိန်း၂၀၀ လှုမလား စဉ်းစားတဲ့ သူ​ဌေးတဦး..အသင်းသား သင်းအုပ်​ သင်း​ထောက်​​တွေ စိတ်​ဝမ်းကွဲမှာ စိုးလို့ မလှု​တော့ဘူး..တဲ့။
သိန်း၎သောင်းခွဲ တန်​ အ​ဆောက်​အဦ ရံပုံ​ငွေ ရှာဖို့ ​ဆောက်​ဖို့ ၈နှစ်​ကြာ အကြီးကျယ်​ ဆု​တောင်း အလုပ်​လုပ်​ရပုံ​တွေ အချိန်​ရရင်​ ​ရေးပြချင်​ပါတယ်​။ အခု အ​ရေးကြီးဆုံးက ထိမ်းသိမ်း ဖို့. ..ဘုရားသခင်​ ဘုန်း​တော်​ထင်​ရှားဖို့ ဆု​တောင်းကြပါစို့။